Moosend: Email Marketing & Akpaaka | Martech Zone
Moosend: Email Marketing & Akpaaka
Sọnde, Febụwarị 17, 2019 Mọnde, Febụwarị 18, 2019 George Fakorellis
Moosend, ọdịda Email Marketing na akpaaka n'elu ikpo okwu, akọwaputala atụmatụ ahia email, atụmatụ ịnye ọnụahịa, na ọnụ ahịa ego na nkwụsi ike ya, nraranye nke ọma, yana nkwado nkwado ndị ahịa.
N'ime naanị afọ 8, Moosend jisiri ike hiwe ọnụnọ zuru ụwa ọnụ na ụlọ ọrụ profaịlụ dị elu na ụlọ ọrụ mba dị iche iche dịka Ted-X, na ING, ịkpọ aha ma ole na ole.
Moosend bụ usoro ikpo okwu mbụ na ụlọ ọrụ ahụ ISO-kwadoro na GDPR, si otú ahụ na-egosi na omume ya ka e mepụtara ya na onye ọrụ ikuziri ya n’uche.
Ihe bidoro dị ka email, nyere ebe ya Email Marketing na akpaaka, na ugbu a AI.
Mgbe ezitere email mbụ na 1971, akụkọ ihe mere eme mere. Ugbu a, na 2019, email agbanweela ike marketing atụmatụ nke ndị ọkachamara n'ahịa na ndị ọrụ kwa ụbọchị na-arụ ọrụ, na-ekwenye ekwenye 400% ROI.
Nke ahụ bụ maka Email Marketing technology amalitela n'ụzọ dị ukwuu, na-enye ndị na-ere ahịa nnukwu ihe ngwọta maka ọtụtụ nsogbu.
N'ụzọ bụ isi, Email Marketing nyiwe agbanwewo ruo n'ókè na ha abụghị naanị akwụkwọ akụkọ, kama, usoro mgbasa ozi n'etiti ndị na-ere ahịa na ndị na-ege ha ntị.
Moosend bụ ihe dị ọnụ ngwa ahịa ozi-e email nke nwere ike ikpuchi ọtụtụ mkpa nke ndị na-ere ahịa na ọ dabara adaba maka nnukwu ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ ọchịchọ ma ọ bụ ndị pere mpe nwere mmefu ego siri ike.
Kemgbe ọtụtụ afọ, Moosend ezutewo nnukwu uto n'ihi ụdị ọmịiko ha nwere na ọrụ nkwado pụrụ iche nke mepụtara ntụkwasị obi n'etiti ha na ndị ahịa ha.
Ha ejisiri ike chọpụta isi ike na adịghị ike nke ngwaahịa na ahịa ha wee mee mgbanwe ziri ezi iji nye azịza zuru oke.
Nke a nwere ike ozugbo enen ke raara onwe ya nye software nyochaa weebụsaịtị, dị ka Kappa na G2Crowd, ebe A họọrọ Moosend n'etiti ndị isi ahịa Softwares n'ụwa niile.
Ngwọta Moosend maka Email Marketing
Moosend's email ahia ngwanrọ bụ igwe ojii ma na-achọ ịnye ndị na-ere ahịa ihe omimi miri emi na ịga n'ihu na ndị na-ege ha ntị. Ọ bụ ọrụ zuru oke na a mfe na kensinammuo interface na-eme ka igodo site na ngwá ọrụ dị mfe na eke.
Otú ọ dị ihe na-eme Moosend pụtara ìhè, bụ olu na ụdị ngwa ọrụ akpaaka yana atụmatụ ịsọ mpi na agbanwe agbanwe.
Ekwesịrị ikwu ya na enwere kpamkpam atụmatụ ebighi-ebi maka ndị debanyere aha 1000, nke karịrị nnọọ anabata.
N'ezie, Moosend ghọtara na ọ dị mkpa ka onye na-azụ ahịa nwee ike ịtụle mbọ ya. Ọ bụ ya mere ikpo okwu na-enye atụmatụ nyocha nke A / B na nke ya Analytics akụkọ nke nwere ike inye ndị ọrụ ahụ nghọta bara uru na nke zuru ezu banyere mkpọsa ha.
A onye-enyi na enyi, dọrọ na-dobe editọ a gụnyere nke bụ nnukwu gbakwunyere ebe ọ bụ na ị nwere ike ịmepụta akwụkwọ akụkọ gị na nkeji na-enweghị mgba na ngwanrọ edezi mpụga nwere ike ịdị mgbagwoju anya. Ihe ndebiri ndị gụnyere gụnyere ọmarịcha aka.
N'ikpeazụ, Moosend nwere ike ijikọ ọnụ na nyiwe ndị ama ama dịka Magento, WooCommerce, na Zapier, ihe na-agbakwụnye ọbụna ntụgharị dị ukwuu na ikpo okwu.
Omume kachasị mma maka ịre ahịa email
Imirikiti ụlọ ọrụ na-eji email Marketing ma ọ dịkarịa ala otu akụkụ nke mgbalị ahịa ha ga-achọpụta na ha nwere nnukwu uru karịa ndị na-asọmpi ha.
Agbanyeghị, ekwesighi ịsị na Email Marketing dị mfe.
Ọ gosipụtara na e nwere usoro dị iche iche na-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na onye ọ bụla na-ere ahịa na-achọ iji nweta ihe kacha mma maka ụlọ ọrụ ya.
Nkewa nkebi bụ ihe na-eme ka ahịa email na-aga nke ọma. Ndị ahịa taa achọghị ka akụnụba azụmahịa na-adịghị mkpa bịara jupụta ha. Ọ bụghị onye ọ bụla chọrọ ịnụ banyere ihe niile na ụzọ kachasị mma iji nweta nke ahụ na ndepụta ndị debanyere aha bụ site na ịkekọrịta ha na ndepụta dị iche iche.
Iji Email Marketing maka Idu Nurturing. Ojiji Email Marketing a na-aga n'ihu kemgbe ọtụtụ afọ. Ebumnuche nke omume ahụ abụghị iji tọghata onye ndu ozugbo kama ka ọ kụziere ya ma gbanwee ya n'ọdịnihu.
Ojiji nke Ahịa ahia nwere ike ịba ụba nsonaazụ dị mma nke ụlọ ọrụ na-enweghị itinye ego na oge ma ọ bụ ikike mmadụ. Enwere ike iji omume a maka ozi ịntanetị nwere ịkpalite akpaghị aka mgbe kpọmkwem ihe dị ka ụgbọ agbahapụ or ịnabata ozi ịntanetị.
Moosend na-elekọta ọtụtụ puku ụlọ ọrụ n'ụwa niile na a dịgasị iche iche nke ọrụ dị ka Email Marketing bụ ihe dị oké mkpa usoro nke ahịa nkwukọrịta na ike ga-tinye n'ọrụ site ọ bụla o kwere omume azụmahịa dị.
Moosend bụ ihe niile ha kwere nkwa ịbụ, na ndị ọzọ! Nkwurịta okwu ahụ dị oke mma, ma onye njikwa akaụntụ Moosend anyị na ndị otu na-akwado ọrụ aka agafeela ma nyere anyị aka iru ebumnuche anyị, oge ọ bụla anyị chọrọ ha. Ngwaahịa a na-ejighị n'aka ma dị mfe iji. Enweghị m ike ịkwado Moosend zuru oke na azụmaahịa ọ bụla na-achọ ESP ọhụrụ.
Anthony Rigby si na CareerBuilder
Na oge dijitalụ ngwaahịa sọftụwia na-eme nke ọma ka ha na-adịwanye mkpa maka ụlọ ọrụ. Iji dị iche na ndị asọmpi, azụmaahịa ugbu a ga-enye ndị ahịa ha ihe karịrị ezigbo ngwaahịa. Ndị ụlọ ọrụ na-aga nke ọma na-adabere na ịnye uru, ihe ọmụma, na nka na ndị ahịa ha.
Ndị ahịa esorola ụzọ okike sitere na mmepe, ha atụkwaghị ntụkwasị obi n'okwu doro anya anya. Kama, ha na-achọ ụkpụrụ nke gbatịrị site na ngwaahịa na ịnye ọnụahịa ngwaahịa (ịghara ịsị na ihe ndị a adịghị mkpa ọzọ).
Moosend mara nke ahụ ma ọ bụ ya mere ha ji elekwasị anya na itinye aka na obodo ha nkwado ndị ahịa na-adị mgbe niile, ha nnukwu oba akwukwo di omimi na isiokwu ahia na ngwa enyemaka ha ma n'efu dị ka Free Isiokwu Line Tester.
Tags: akụrụngwa ahịa
George bụ Onye Mmekọrịta Onye Mmepụta arụ ọrụ maka email akpaaka software Moosend! Ọ hụrụ n'anya ide banyere Marketing na Digital Era na uto hacks na ọ na-achọpụta na ya kwa ụbọchị explorations. Ọ nwere mmasị na mgbe niile ikwu okwu banyere ahụmịhe na echiche wee nweere onwe gị ịhapụ ya ozi iji kesaa ihe ọmụma gị na-atọ ụtọ.
Rụ a Ndepụta Ndepụta maka Email Marketing
Mkpa ka inyochaa DNS Obodo Iji ụsụụ ndị agha na OSX?